Mkpakọrịta nwoke na nwanyị n'ịntanetị apụwo n'anya n'ụdị ụdị mmekọrịta ahụ na Tinder aghọọla otu n'ime ụzọ egwuregwu kachasị ewu ewu n'ụwa. Ngwa a, nke a makwaara maka njikọ mkpọ, nwekwara ike ịba uru maka mmekọrịta shuga. You bụ nwa agbọghọ na-eche etu esi achọta shuga nna na Tinder? You bu nwa nwoke n’aju ka esi acho aria mamma on Tinder ma obu ibu nna shuga icho acho acho acho nwa shuga na Tinder? E nwere ụzọ ịga nke ọma ị ga - esi mee nke a.
Etu ị ga-esi achọta nwa shuga na Tinder
Nzọụkwụ mbụ mgbe ị na-achọpụta otu esi achọta nwa shuga na Tinder bụ ịdebanye aha na ịmepụta profaịlụ nke ga-adọta nwa na-eto eto ịchọrọ. Tinder abụghị naanị maka mmekọrịta shuga ka ị ga - achọpụta na ndị nwere shuga nna nwere ike ịbụ ndị na - edoghị anya na ndụ ha. A na-atụ aro ka ị kọwaa afọ ole ị dị n'ezie wee gosipụta ebumnuche gị. Nke a dị mma maka ụmụ shuga na-achọ otu esi achọta shuga papa na mama mama na Tinder.
Ihe osise bu ezigbo echiche mbu. Iji mee ka ụmụ agbọghọ na-eto eto na-achọ nnụnụ shuga ma ọ bụ nne, yi uwe ahụ ma dị ka nke bara ụba imebi ha. E nwere aghụghọ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị mụtara mgbe ha na-achọ ozi maka otu esi achọ mama shuga na Tinder ma ọ bụ otu esi achọta shuga nna na Tinder. Ha na-edobe ọnụ ọgụgụ afọ ha ka afọ 40 na karịa ka ha wee nwee ike ịchọta ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ndị okenye na ndị nwere nnukwu ego. Foto dị mma ga-eme gị egwuregwu dị mfe.
Otu akụkụ siri ike mgbe ị na-achọta otu esi achọpụta nwa shuga na Tinder bụ ịkọwa ebumnuche gị ozugbo. Mkparịta ụka shuga izizi na Tinder na-amalite site na ọtụtụ vagueness n'ihi na iwu na iwu nke ngwa ahụ anaghị akwado mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Ozugbo ị ji n'aka na ị na-agwa ndị egwuregwu zuru oke okwu mgbe ahụ ị ga - ebido kwurita ihe ndị ị tụrụ anya na nzuko na nkwekọrịta.
Ime ka nwa gị shuga mara ihe ịchọrọ na mbido ga-azọpụta gị mkparịta ụka toro ogologo, nke edoghị anya na nke na-akụda mmụọ. Youngmụ nwoke na ụmụ nwanyị ndị a nwere sugar nwa na-atụ anya dịkwa ka nne ma ọ bụ nne shuga, ị maara ihe ndị ị na-eji ego gị na oke ha. Ka ị na-akwado maka otu esi achọta nwa shuga na Tinder, mara ego ole ị dị njikere imefu na nkwere.
Etu ị ga-esi achọta Sugar Daddy na Tinder
Mgbe ị na - esonyere Tinder ma mepụta bio gị, na - ekwupụta ozugbo na ị na - achọ shuga nna nwere ike ime ka ị machibidoro gị n'elu ikpo okwu. Nke a bụ n'ihi na etolitela ngwa ahụ maka nkwekọ mmekọrịta na mmekọrịta mmekọrịta. Ka ị na-arụ ọrụ otu esi achọta shuga nna ya na Tinder, mepụta profaịlụ nke na-egosi ụdị nwoke ị na-achọ nke ọma site n’okwu ejirila ya mee, ka amachibido gị na ngwa ahụ.
Dika nna ndi shuga na ndi mgbo acho na acho uzo esi acho nwa shuga na Tinder site na bios na onyonyo ha, umu aka shuga choro ezigbo oyuyo. Ọtụtụ n’ime ụmụ nwoke ndị okenye ndị ahụ na-achọ ụmụ agbọghọ tọrọ atọ karịa maka mkpakọrịta. Were onwe gi ma were ezigbo foto maka profaịlụ gi. Ikwesiri igba mbọ hụ na onyonyo Facebook na nke Instagram gị wepụta ihe kachasị mma maka na Tinder na-ejikọ ma n’ime akaụntụ abụọ ahụ maka ozi ndị ọzọ.
Mgbe ị ga - eme nke ọma n’ihu shuga nna nwere ike ime, ọ dị mkpa ịkọwapụta ihe ị na - achọ n’ụzọ doro anya ka ị ghara ịda mba na - enwe obere mgbanwe. N'adịghị ka shuga ebe a na-ekwukarị nkata, ọtụtụ ụmụ nwoke na-esonyere Tinder maka ụmụ shuga nwere ike ha amaghị na ịchọrọ ntinye aka na mgbakwunye na onyinye na oke nri.
Etu ị ga-esi achọta mama shuga na Tinder
Mgbe ị na-achọ ozi banyere otu esi achọta mama mamịrị na Tinder, afọ, ọdịdị na akụnụba ego ga-abụ ihe kachasị mkpa. Womenmụ nwanyị ndị okenye, ndị bara ọgaranya karị na-achọ ụmụ okorobịa mepụtara profaịlụ na-egosipụta ihe ndị a niile n'otu oge. Dika nwa-okorọbia na-acho shuga mamma, kpachapu ihe ichoro ya rue afo iri abuo ma karia mgbea ka ndise ha na bios duo gi. Ọ bụrụ na ị na-achọ ozi ndị ọzọ gbasara ụzọ ha si ebi ndụ lelee Facebook na Instagram nke kwesịrị ijikọ na akaụntụ ha.
Mụ nwoke ga-enwerịrị profaịlụ mara mma dị ka ụmụ agbọghọ na-eme mgbe ha na-akwado maka etu ha ga-esi chọta shuga dị n’aka. Imirikiti shuga na-achọ mma, ụmụ nwoke siri ike, ndị nwere ike igbo mkpa anụ ahụ́ ha. Gaa na mgbatị ahụ, kpachara onwe gị anya were obere foto maka profaịlụ gị. Gbaa mbọ hụ na akaụntụ Facebook gị gosipụtara otu ihe ahụ ma gosipụta ụzọ ndụ gị n’ụzọ zuru oke. Ọtụtụ shuga mommas nwere ụtọ a nụchara anụcha na ụmụ nwoke.
Ccessga nke Ọma maka mkpakọrịta nwoke na nwaanyị
Azụlitela ngwa ahụ ka ị na-arụkwu ọrụ, ka ọ ga-esiri gị ike ị na-ezute onye ị ga-achọ ịlụ. Ọ bụrụ na ị na-eche otu esi achọta nwa shuga na Tinder, nke a abụghị maka nnukwu ọrụ n'aka otu oge na ndị ọrụ ndụ. Mgbe ị na-emegharị ugboro ugboro, ọ ga-adịrịrị mfe maka ngwa ahụ ịchọpụta ụdị mmadụ ị na-achọ na ọtụtụ ndụmọdụ ị ga-enweta. Nke a metụtakwara ndị na-ajụ otu esi achọta shuga na Tinder ma ọ bụ otu esi achọta shuga mama na Tinder.Tinder ịbụ ebe a na-ejikọkarị ọnụ, iji chọta shuga nna, mama ma ọ bụ nwa na Tinder nwere ike ịdị ka agịga na a haystack. Mgbe ị na-achọpụta otu esi achọta shuga nna na Tinder ma ọ bụ otu esi achọta mama mama na Tinder. Buru n'uche na iji saịtị emere naanị maka mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ga - enye gi ohere zuru oke nke nzute shuga ezi nna, mama ma obu nwa. Ndi nwere shuga na ndi umma ndi sonyere na ntinye dika Tinder nwere ike di na ya maka imezi ngwa ngwa. Tinder dị mma maka ụbọchị nkịtị.
OsoteDi na Nwunye Ntugharị Mmemme Na-akpata Desegregation na America »
Previous «Sugar Daddy, Mama na Baby Na Facebook, Instagram & Twitter
Xoli ekwu, sị:
January 26, 2020 na 9: 23 pm
Naanị ịchọrọ shuga na-arịa shuga ka ekpori ndụ ma jupụta mkpa ya, ọ ga-ahụkwa mkpa m
Nnamchi chimdindu ekwu, sị:
March 1, 2020 na 8: 33 pm
Achọrọ m papa papa, onye kwesịrị biko jikọtara m na otu
Duy linh ekwu, sị:
June 14, 2020 na 7: 41 pm
Mình xin id zalo ạ
Ogbako 59 ekwu, sị:
March 9, 2020 na 3: 20 am
Achọrọ m shuga mummy gburugburu calabar Nigeria.
Chouchou ekwu, sị:
March 22, 2020 na 12: 23 pm
Je veux un daddy que je pourais afọ ojuju
Ọkụ ekwu, sị:
April 29, 2020 na 5: 09 pm
Achọrọ m nna papa shuga iji kporie ndụ.
otu_okoi ekwu, sị:
May 28, 2020 na 3: 34 pm
Nwere ike onye ọ bụla tinye m na WhatsApp Achọrọ m shuga mama m na-ekwe nkwa ime ka obi dị gị mma na nke a bụ nọmba m. , 09013234486
Trần Yến ekwu, sị:
September 4, 2020 na 6: 14 pm
Achọrọ m shuga ụbọchị ụka
Tags: Etu esi achota sugar papa, Momma & Babe, Tinder